केही महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थलहरू::DainikPatra
बिहिबार, अशोज ३०, २०७६ | Thursday 17th October 2019
केही महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थलहरू
सोमवार, भदौ ३०, २०७६
दशंै तिहार जस्ता चाडको मौसम । विदाको समय । यसै पनि रमाइलो । फुर्सदिलो समयमा घुमघामको आनन्द किन नलिने ? केही वर्षयता आएर नयाँ वर्ष तथा विदाको समयमा घुमफिर गर्ने चलन चलेको छ । नेपालमा यस्ता धेरै स्थान छन् घुम्नका लागि पर्यटकीय स्थल जहाँ पुगेर आनन्द लिन सकिन्छ ।
स्वर्गद्वारी धार्मिक हिसाबले जति महत्व रहेको छ, प्राकृतिक सुन्दरता पनि त्यति नै भरिपूर्ण छ । स्वर्गद्वारीबाट आठ हजार मिटर भन्दा अग्ला तीनवटा हिमाल र अन्य दर्जनौं हिमश्रृंखला हेर्न पाइन्छ । स्वर्गद्वारीको पसिरबाट धौलागिरि, नीलगिरि, माछापुच्छे्र, अन्नपूर्ण, लमजुङ, हिमचुली, मनास्लु, चुरेन, पुथालगायत हिमशृंखला देखिन्छ । तर पनि प्राकृतिक सौन्दर्यले भन्दा धार्मिक कारणले स्वर्गद्वारी चर्चित छ ।
स्वर्गद्वारी प्युठान जिल्लाको सदरमुकाम खलंगाबाट करिब २६ किलोमिटर पश्चिममा अवस्थित धार्मिक पर्यटकीय स्थल हो । नेपालका प्राचीन मन्दिरहरू मध्ये स्वर्गद्वारी मन्दिर एक मानिन्छ । पौराणिक कालमा पाण्डवहरू स्वर्ग जाँदा यहाँको बाटो भएर गएको द्वार हुनाले स्वर्गद्वारी नाम रहेको जनविश्वास रहेको छ । झट्ट हेर्दा नौवटा मन्दिरजस्तो देखिने स्वर्गद्वारीको मन्दिरमा यज्ञशालाभित्र पाञ्चायन देवदेवी, गणेश, सूर्य, विष्णु र शिवका मूर्ति छन् । चार दिशाका कोठामा अग्निकुण्ड र बीचको यज्ञशालामा होमन कार्य हुन्छ । स्वर्गद्वारीमा वटुकले पूजा, वेदपाठ, भागवत पाठ, हवन, रुद्राभिषेक गर्छन । स्वर्गद्वारीमा गाईको महत्व बढी मानिन्छ । महाप्रभूका पालामा स्वर्गद्वारीमा हजारौ गाईहरू थिए । महाप्रभू स्वयमले पनि गाईको सेवा गरेको इतिहास छ । स्वर्गद्वारीमा गुरुकुल विद्यालय छ । गुरुकुल विद्यालयमा वेद, रुद्री, चण्डी र व्याकरण पढाइन्छ ।
स्वर्गद्वारी तपोभूमी प्रदेश नम्वर ५ प्युठान जिल्लाको स्वर्गद्वारी नगरपालिकामा पर्दछ । रोल्पा जिल्लाको रुम्टी गाँउमा वि.स. १९१६ मा जन्मनुभएका १०८ महाप्रमु बालतपस्वि श्री नारायण गौतम १९५१ मा स्वर्गद्वारीमा आएपछि वेदका मन्त्रद्वारा अग्नि प्रज्योलित गरी १९५२ बैसाख पूर्णिमादेखि अखण्ड महायज्ञ सुरु गर्नु भएको हो । जुन विश्व शान्तिको लागि सञ्चालीत हवनकुण्ड बेदको मन्त्रद्वारा अग्नि स्थापना गरी दीप प्रज्जवलित भएको हो । हवनकुण्डमा हालसम्म निरन्तर अग्नि जलिरहेको छ । बेद गुरुहरूद्वारा पूजा गरिने हवनकुण्डको विभूति प्रसादीको रूपमा ग्रहण गरिन्छ ।
उपत्यका बाहिर बस्नेहरूको निम्ति कौतूहलताको सहर हो, काठमाडौं । विनासकारी भूकम्पपछि तंग्रिदै गरेको यो सहर नयाा वर्षका निम्ति घुम्न सकिने प्रमुख गन्तव्य हो । काठमाडौं उपत्यकाको घुमघामले प्राचीन नेपाली सभ्यतालाई नियाल्ने मौका मात्र दिदैन, आधुनिकतातर्फउन्मूख सहरबासीको जीवनशैली साक्षात्कार समेत गराउँछ । चाहे धार्मिकस्थल होस, चाहे पौराणिक स्थल होस, सबैलाई समेटेको छ यो शहरले । त्यसो त किनमेल, खानपानको लागि समेत काठमाडौं सहि रोजाइ हुनसक्छ ।
घुम्मक्कडहरूको निम्ति राम्रो गन्तव्य हो, पोखरा । बाह्रैमास पर्यटक पर्खेर वस्ने पोखरा नयाँ वर्षको बेला घुम्न सकिने अर्को सहर हो । यहाँ हिमाली दृश्यको प्रतिच्छाँयामा लमतन्न सुतेको ताल छ, गुफा छ, मन्दिर छ । अरू थुप्रै कुरा छ, जो पर्यटकले चाहन्छन् । फेवाताल, महेन्द्र गुफा, पातले छाँगो, सराङकोट जस्ता थुप्रै स्थलहरूले जो कोहीको मन सजिलै लोभ्याउछ । धौलागिरि, अन्ननपूर्ण र मनास्लु श्रृंखला लगायत ८ हजार मिटर भन्दा अग्ला हिमालहरू यहाँवाट देख्न सकिन्छ । फेवाताल पोखराको मुख्य आकर्षण हो । यहाँ माछापुच्छ«े हिमालको प्रतिविम्व देखिन्छ । मौसम खुलेको बेला यो दृश्यले साँच्चैनै पर्यटकको मन लोभ्याउँछ । पातले, महेन्द्र र गुप्तेश्वर गुफा पोखराको थप आकर्षण हुन् ।
नया वर्षको मदहोस मौसममा सौराहाको भ्रमण धेरै अर्थले यादगार हुनसक्छ । परिवारसहित सौराहाको भ्रमण गरेर नयाँ वर्ष मनाउन सकिन्छ । खासगरी बालबच्चा छ भने, सौराहामा रमाउने अनेकौं काइदा छन् । हात्तीको बथान हेर्न सकिन्छ, जंगल सफारी गर्न सकिन्छ, टाँगा चढेर एक फन्को लगाउन सकिन्छ, नदीकोतिरमा बसेर साँझको सूर्यास्त हेर्दै चिसो पेयको चुस्की लिन सकिन्छ । हात्तीमा चढेर गरिने जंगल सफारी र राप्ती नदीको किनारबाट साँझको सूर्यास्त हेर्न पाउनु यहाँको विशेषता हो । विदेशी पर्यटकको लागि पनि चितवन आकर्षणको केन्द्र बन्दै आएको छ । यहाँ गैडा, बाघ, निल गाई, गोही, अजीङ्गर, चितुवा लगायतका वन्यजन्तुहरू पाइन्छ ।
तपाई युवा उमेरको हुनुहुन्छ र साथीभाइसँग रमाइलो यात्रा गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ भने, मनाङ सही रोजाइ हुनसक्छ । नयाँ वर्षको फुर्सदिलो समयमा मनाङको यात्राले तपाईमा बेग्लै ताजगी भरिदिनेछ । गण्डकी प्रदेशमाको मनाङ एकचोटि टेक्नैपर्ने स्थान हो । यहाँ भौगोलिक, जातीय र सांस्कृतिक विविधता छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सर्वेक्षणले अन्नपूर्ण पदयात्रा मार्गलाई जीवनमा एकपटक पुग्नै पर्ने विश्वका उत्कृष्ट १० गन्तव्यका रूपमा राखेको छ । यो अन्नपूर्ण पदयात्रा मार्गको रूपमा महत्वपूर्ण हिस्साको रूपमा रहेको छ । पर्यटकीय दृष्टिले पिसाङ, भ्राखा, खाडसागर, टंकिमनाङ, नार र फू, थोन्चे, तिलिचो ताल महत्वपूर्ण मानिन्छ । अन्नपूर्ण पदयात्रा मार्गको बाटोवाटोमा रहेका घरमा होमस्टेको सुविधा छ ।
नयाँ वर्षको छेक पारेर लामो बिदामा नयाँ वर्ष मनाउने मुड भएकाहरू डोल्पाको यात्रामा निस्किए हुन्छ । से–फोक्सुन्डो ताललाई गन्तव्य वनाएर डोल्पाको यात्रा गर्न सकिन्छ । कर्णाली प्रदेशमा रहेको नौ जिल्लाहरू मध्ये एक हो डोल्पा । यस जिल्लाको मुख्य आकर्षण से–फोक्सुन्डो ताल हो । ४ दशमलव ८ किलोमिटर लाम्चो, १ दसमलव ८ किलोमिटर चौडा यो ताल ६ सय ५० मिटर गहिरो छ । जीवविहीन यो ताललाई हरियो र नीलो रङको अनुपम मिश्रणले रङ्गाएको छ । आकासमा सूर्यको स्थानसँगै रङ फेर्ने फोक्सुन्डोको कन्चन पानीलाई नाङ्गा हिमालहरूले पहरा दिएका छन् । उपल्लो डोल्पामा पर्ने से गुम्बा विश्वका प्रमुख बाह्र बौद्ध गुम्वाहरू मध्येको एक मानिन्छ । यहाँको से–फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुन्ज नेपालकै सवैभन्दा ठूलो निकुन्ज हो । यहाँ पुग्न मुख्य चल्तीको नाका जुफाल विमानस्थल हो । यहावाट तीन घण्टाको हिंडाइमा डोल्पाको सदरमुकाम दुनै पुगिन्छ । जहाँवाट वास्तविक पदयात्राको आनन्दसहित से फोक्सुन्डोको यात्रा सुरु हुन्छ ।
पौराणिक एवं धार्मिक स्थलको भ्रमणले मनलाई शान्त तुल्याउँछ । नयाँ वर्षको बिदामा यस्तै स्थानको भ्रमण गर्न पाए कति मज्जा हुँदो हो । यस्तै सोच्नुहुन्छ भने, तपाई जनकपुरको यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ । सवारी साधनको उपलब्धताले गर्दा जनकपुर आउजाउ गर्न कठिन छैन । त्यसैले परिवारका सदस्यको साथमा जनकपुर पुग्न सकिन्छ । जनकपुर खासगरी धार्मिक पर्यटनको लागि चर्चित स्थान हो । जानकी मन्दिर यहाँको खास आकर्षण हो । मैथली संस्कृतिलाई नजिकवाट नियाल्न पनि यो राम्रो गन्तव्य हुनसक्छ ।
धार्मिक पर्यटनका लागि विश्वमै कहलिएको स्थान हो, लुम्बिनी । नयाँ वर्षको फुर्सदमा लुम्बिनीको चक्कर किन नलगाउने ? खासगरी बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको महान् तीर्थस्थल लुम्बिनीमा आगन्तुकको मन लोभ्याउने थुप्रै कुरा छन् । शान्त स्वभावको हुनुहुन्छ, धार्मिक आस्था राख्नुहुन्छ भने, नयाँ वर्षको फुर्सदिलो दिनको सदुपयोग गर्दै लुम्बिनी जानुहोस् । भनिरहनु पर्दैन, यो भगवान वुद्धको जन्मस्थल हो । यस हिसाबले पनि पवित्र छ लुम्विनी । नयाँ वर्ष जस्तो धार्मिक पर्वमा लुम्बिनीको यात्रा अर्थपूर्ण हुनसक्छ ।
रारा त्यसै रमाइलो, उसै रमाइलो । वर्षभरको तनाव, धपेडी भुलेर उन्मुक्त रमाउन चाहनेहरू किन रारा नपुग्ने ? नयाँ वर्षको फुर्सदमा राराको यात्रा स्मरणीय हुनसक्छ । बदिलइरहने पृष्ठभूमिमा गाढा निलो पानीले भरिएको यो ताल हेर्दा साँच्चैको स्वर्ग पुगेको आभास मिल्छ । मुगु जिल्लामा रहेको रारा नेपालकै सबैभन्दा ठूलो ताल हो । ताल वरिपरि फन्को लगाउन गोरेटो पनि छ । राराको कन्चन पानीमा स्नो ट्राउट माछादेखि हास, जलेवा, क¥याङकुरुङ जस्ता चराहरू जलक्रिडामा मस्त हुन्छन् । रारा ताल १०.८ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । रारा तालको अधिकतम लम्बाई ५ किलोमिटर र अधिकतम चौडाई ३.२ किलोमिटर रहेको छ भने राराको गहिराई १६७ मिटर रहेको छ । रारा राष्ट्रिय निकुञ्जले मुगु जिल्लामा रारा ताल र वरिपरिको क्षेत्र ओगटेको छ । यो निकुञ्ज बि.स.२०३३ सालमा स्थापपना गरिएको हो । रारा समुन्द्र सतहबाट १० हजार फिटको उचाईमा रहेको छ ।
रारा ताल स्वच्छ पानीमा नीलो आकाशको छायाका कारण गाढा नीलो देखिन्छ । तालको वरिपरि घुम्नका लागि ट्रेकिङ रुट छ । सफा पानीमा स्नो ट्राउट माछा तथा हाँस, जलेवाजस्ता चराहरू डुबुल्की मारेको दृष्यले राराको वातावरण नै भिन्न देखिन्छ । दिनभरीमा आफ्नो रूप फेरिरहने राराताल जेष्ठदेखि आश्विन महिनासम्म विभिन्न फूलहरूले सजिएर मानौ स्वर्गकी अप्सरा जस्तै देखिन्छ । रारा तालको अर्को विशेषता के छ भने यस तालमा विश्वमा अन्यत्र कही पनि नपाइने असला जातको हिमाली माछा पाइन्छ । रारा तालबाट करीब ३ घण्टाको पैदल यात्रा पश्चात् यसको पश्चिमतर्फ रहेको मुर्माटपमा पुग्न सकिन्छ । जहाँबाट रारा तालको मनमोहक दृष्यका साथै सैपाल हिमालको श्रृङखलाको मनोरम अवलोकन गर्न समेत सकिन्छ । रारा तालमा सिस्ने हिमाल र कान्जिरोवा हिमालको मनोरम दृश्य देखिन्छ । रारा क्षेत्रमा पुगेपछि पाइने प्राकृतिक आनन्द, चिसो हावा, वरिपरि जंगलले घेरिएको रारा साँच्चै मनमोहक छ ।
नजिकबाट हेर्दा पोखरी, अलि परबाट हेर्दा ताल र अलि माथि डाँडाबाट हेर्दा रारा कुण्ड अर्थात कचौराको आकारमा देखिन्छ । रारा नजिकै मचानमा बसेर राराको पानीलाई एकनासले नियाल्ने हो भने मचान आफैं चलामान भएको जस्तो अनुभूति दिलाउँछ । रारामा नै एकोहोरो हेरिरहने हो भने पानीको बहावका कारण आफैं डुङ्गामा बसेर यात्रा गरेको जस्तै अनुभूति हुन्छ । रारा ताल पुग्न नेपालगञ्ज तथा सुर्खेतवाट करिव आधा घण्टाको हवाइ यात्रामा ताल्चा विमानस्थल भएर अथवा गाडीबाट कर्णाली राजमार्ग भएर पनि जान सकिन्छ ।
चिसो हावापानी, चिया वगानको रमणीयतामा हराउनेहरूलाई इलाम सही गन्तव्य हुनसक्छ । पूर्वी पहाडी जिल्ला इलाम नयाँ वर्षको बेला घुम्न लायक स्थानमध्येमा एक हो । इलामको यात्राले उच्च हिमाली भेगदेखि घना चिया बगानको रमणीयता अवलोकन गर्ने अवसर जुराइदिन्छ । यसका लागि कन्याम र सन्दकपुर छुटाउन हुन्न । थुम्का थुम्कामा लगाइएको चिया बगान र नागबेली सडकले पनि यहाँको प्राकृतिक सुन्दरताको झल्को दिन्छ । सूर्योदय दृश्यावलोकनको लागि नेपालमै प्रख्यात श्रीअन्तु देखि जैविक विविधताले सम्पन्न माइपोखरी र सन्दकपुरसम्मको यात्राले इलाम भ्रमण सार्थक बनाइदिन्छ । दसैंको बेला इलामको मौसम सफा हुन्छ । कन्याम चियाबगान, माइपोखरी, सन्दकपुर तथा श्रीअन्तु पर्यटकका लागि चर्चित स्थान हुन् । माइपोखरी तथा सन्दकपुरले धार्मिक पर्यटनका लागि पनि ख्याती कमाएका छन् ।
नया वर्षको बिदामा पहाडका ग्रामीण जनजीवनसँग साक्षत्कार गर्ने हो भने, जिरी पुग्नुपर्छ । जिरीलाई नेपालको स्विजरल्यान्डको उपमा दिइएको छ । मनोरम प्राकृतिक भूबनोटको कारण जिरीले आगन्तुकको मन सजिलै लोभ्याउन सक्छ । तामाकोशीको गडगडाहाट, हरियाली, झरनाहरू र ग्रामीण परिवेशले जिरीलाई सुन्दर बनाएको छ । जिरीलाई सगरमाथाको प्रवेशद्वार पनि मानिन्छ । काठमाडौंवाट टाढा भएपनि यहाँको विकास लोभलाग्दो छ । स्वीस सरकारको सहयोगमा सञ्चालित जिरी बहुउद्देशीय विकास परियोजनाले कृषि सडक, शिक्षा तथा ग्रामीण विकासमा सहयोग गरिरहेको छ । स्वीस सरकारको सहयोगमा जिरीमा स्तरीय अस्पताल, भौतिक सुविधासम्पन्न विद्यालय, सबैका घरमा गोठ तथा चर्पी बनेका छन् । स्वीस सरकारको सहयोगमा वृक्षारोपण भएपछि यहाँका सबै डाँडा हरियाली वनेका छन् ।
दैनिक पत्र संवाददाता /सोमवार, अशोज ६, २०७६
नेपालको आकाशिदो व्यापार घाटा
दैनिक पत्र संवाददाता /शनिबार, अशोज ४, २०७६
नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक संविधान–२०७२
दैनिक पत्र संवाददाता /सोमवार, भदौ ३०, २०७६
संघीय प्रणालीमा आर्थिक मोडेलसंघीय अर्थतन्त्रलाई हेर्ने सिद्धान्त वित्तीय संघीयता
संघीयतामा विद्यालय शिक्षा
सबैका लागि र सधैंका लागि योग
नुरजंग के.सी. एउटा देशले आफ्नो देशमा उत्पादन हुन नसकेको वस्तु अर्को देशबाट आयात गर्दछ भने...
गोर्खा राज्यले नेपाल निर्माण गरे पछि ब्रिटिश भारतले नेपाल उपर औपनिवेशिक आक्रमण ग¥यो । सन्...
अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणले प्रादेशिक र समग्रमा संघीय अर्थतन्त्रलाई हेर्ने सिद्धान्त वित्तीय संघियता (फिस्कल फेडेरालिज्म) हो ।...